အာဖျံကွီးနဲ. အရိပ်တစ္ဆေ ဒုတိယပိုင်း (Shadow Ghost I Met – Part B) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အာဖျံကွီးနဲ. အရိပ်တစ္ဆေ ဒုတိယပိုင်း (Shadow Ghost I Met – Part B)
အာဖျံကွီးနဲ. အရိပ်တစ္ဆေ ဒုတိယပိုင်း (Shadow Ghost I Met – Part B)
Posted by အာဖျံ ကွီး on Nov 20, 2010 in Creative Writing, My Dear Diary, News |5comments
ဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ. အာဖျံကွီးပြောတာကို လူကြီးတွေ လက်ခံခဲ့ကြတရ်ဆိုတာ ပြောတော့မရ်ဗျာ …
မပြောခင် … အိမ်ဖွဲ.စည်းပုံကို အရင်ရှင်းပြမရ် …
အပေါ်ထပ်မှာက အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းရှိတရ်၊ အိပ်ခန်းတွေကိုကျော်ပီး ရှေ.ကိုဆက်လျှောက်သွားရင် ၀ရံတာရှိတရ်။ အစတုန်းကတော့ ၀ရံတာမှာ ဘာမှမရှိဘူး။ အဲဒါကိုချစ်လှစွာသောဦးလေးဖြစ်သူက ၀ရံတာရဲ.ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာ အခန်းလေးတစ်ခန်းလုပ်လိုက်တရ်၊ အာဖျံကွီးရဲ.အခန်းနဲ.ကပ်ရပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ကြားထဲမှာနံရံလေးတစ်ခုပဲခြားတော့တရ်။ သူက အမြဲတမ်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ. ဂီတာတီး၊ လျှောက်သွားနေကျဆိုတော့ အိမ်ပြန်နောက်ကျတတ်တရ်။ ပြန်လာရင်တံခါးခေါက်ပီးဝင်နေရတာဆိုတော့ သူဘယ်အချိန်ပြန်လာလဲဆိုတာ အိမ်ကလူတွေသိတရ်၊ သိတော့သူအဆူခံရတရ်ပေါ့။ အခန်းလေးလုပ်လိုက်တော့ သူ.အတွက် တော်တော် အဆင်ပြေသွားတရ်လေ။ ဘယ်အချိန်ပြန်လာလာ OK ပဲ။ ခြံစည်းရိုးကိုကျော်တက် .. ပီးရင်ပေါ်ကိုတွယ်တက် … သူ.အခန်းကိုသူဝင်ပီးအိပ်။ အဲလို … အဲလို …။သူကလဲ သူ.အကြံနဲ.သူ။ (ချစ်လှစွာသောဦးလေးဥာဏ်ကောင်းချက်က အာဖျံကွီးနဲ. တစ်ထပ်တည်းပဲ ဟဲဟဲဟဲ)
ဒီလိုနဲ.သူလဲ သင်တန်းတွေ ဘာတွေတက်ဖို. ရန်ကုန်တက်သွားတော့ သူ.အခန်းလေးက ပိုင်ရှင်မဲ့ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ နေ.လည်နေ.ခင်းဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်ယောက်ဝင်ပီး တရေးတမောဝင်အိပ်ကြတာတော့ရှိတရ်။ ညဘက်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ ထွက်မအိပ်ဘူး။
တစ်ရက်တော့ အသိအဘွားတစ်ယောက်ရောက်လာတရ်။ သူကိစ္စနဲ.သူလာတာ။ အရမ်းလဲခင်ကြတရ်။ အာဖျံကွီးတို.မြို.ကိုလာတိုင်း အာဖျံကွီးတို.အိမ်မှာတည်းနေကျ။ သူကဘုရားတရားအရမ်းလုပ်တရ်။ ဒီတခါလာလည်တော့ သူကဘာစိတ်ကူးပေါက်တရ်မသိဘူး။ ၀ရံတာကအခန်းလေးမှာပဲ သူ.အတွက် စီစဉ်ပေးပါတဲ့။ သီးသန်.ခန်းလေးဆိုတော့ သူ.အတွက် တရားထိုင်ရတာ တော်တော်အဆင်ပြေတရ်ဆိုပဲ။
အဲဒီမှာစတွေ.တော့တာပဲ။ ဒါနဲ.ပဲ … ညဘက်ကျတော့ ၀င်အိပ်ရော။ ဘုရားရှိခိုး၊ တရားထိုင်တာတို.လဲ ထုံးစံအတိုင်း လုပ်တရ်ပေါ့ဗျာ။ မနက်စောစော ၃ နာရီလောက် တစ်ခါတရားထပ်ထိုင်တုန်း … သူ.နားထဲမှာ အခန်းအ၀ဘက်ကလာတဲ့ အသံတစ်သံကြားတရ်တဲ့။ ဘာပြောလဲဆိုတော့ (ဟဲ့ … အဘွားကြီး … နင့်ငါ့အခန်းထဲက ထွက်သွား … နင်ရှိနေတာနဲ. ငါ့မှာတော်တော်လေး ပူလောင်တဲ့ ဝေဒနာခံစားနေရတရ် … အခုချက်ချင်းထွက်သွား လို.ပြောတရ်တဲ့) သူလဲနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ မပီမပြင် ၀ိုးတ၀ါးနဲ. ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် (အာဖျံကွီး မြင်ခဲ့ရတဲ့ အကောင်ပေါ့ဗျာ) တံခါးကိုကိုင်ပီးရပ်နေတာ တွေ.တရ်တဲ့။ အဘွားကလဲ သမာဓိကောင်းသူပီပီ (ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ … ဒီနေရာက နာနာဘာဝ၊ ၀ိနာဘာဝတွေရဲ. နေရာမဟုတ်ဘူး။ နေစရာမရှိရင် ဘုံမ္မစိုးနတ်တွေဆီမှာ သွားတောင်း၊ ငါလဲမင်းကို အမျှအတမ်းပေးဝေမရ် … မနေသင့်တဲ့နေရာမှာ ဆက်မနေပဲ အခုချက်ချင်းသွားတော့) ဆိုပီးပြောလိုက်တော့ ဘာမှမပြောပဲ လှည့်ထွက်သွားပီးပျောက်သွားတရ်တဲ့။
မနက်မိုးလင်းတော့ ပြန်ပြောပြတာပေါ့။ ဒါနဲ.ပဲ အလှုအတန်းတွေ ဘာတွေလုပ်ကြတာပေါ့။ ဒီနေ.ထိတော့ ဘာမှထပ်မတွေ.တော့ဘူး။ အမျိုးအဆွေလဲ မဟုတ်ပဲနဲ. ဒီကောင်အိမ်ထဲ ဘယ်လိုရောက်နေတာလဲလို. တွေးကြည့်တော့ … အရက်သောက်ပီး အိမ်ပြန်လာတတ်တဲ့ ချစ်လှစွာသော ဦးလေးနောက်က ပါလာတာပဲလို. အာဖျံကွီးကတော့ ကောက်ချက်ချမိတရ်ဗျာ။
ဘာမထီ အာဇာနည် မိသားစုတွေပေါ့လေ
အဲဒီသရဲက ငါပဲကွ။ အာဖျံကွီး အသိအဖွားကြီးက ဟောက်လွှတ်လိုက်လို့ ခြေဦးတည့်ရာ စွတ်ပြေးလိုက်တာ ကံကောင်းခြင်တော့ နိုင်ငံခြားကို တန်းရောက်သွားတာပဲ။ အဟတ် အဟတ်၊ အာဖျံကွီးလည်း ကိုကြောင်ကြီးလို ကံကောင်းချင်ရင် အရင်ဆုံး နာနာဘာဝ သရဲဖြစ်အောင်အရင်လုပ်။
မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေလာတွေ.နေတာပဲနော်။ ကိုကြောင်ကြီး @ ကိုကြီးကြောင်တို.က တကရ်ရီရတာပဲ … အဟတ် အဟတ်။ ဒုတိယပိုင်းမှပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မှတ်မိသတဲ့လား။
အဲ့ဒါမျိုးလေး မမြင်ဖူးသေးဘူး ။ တစ်သက်မှာ ကြုံရခဲတဲ့အဖြစ်ဟာကို တွေ့ခွင့်ရှိမှတွေ့ရတာ လေ ။
$$$$$$$$$$ Aaaaaa $$$$$$$$$$$$$